Aqara Hub avy ao amin'i Xiaomi Mi Home - konfigurasi ary torolalana HomeKit - SmartMe
Aqara Hub avy amin'ny mpitari-dàlana Xiaomi - izay rehetra tokony ho fantatrao mba hampandeha azy araka ny tokony ho izy!
Aqar, hubara aqara
Aqara Hub no ivon'ny tranon-tsainao mahay raha miorina amin'ny vokatra Aqara na Xiaomi. Fa angamba tsy ny zava-drehetra ao amin'ny fanitsiana ny fitaovana lasa adala, na dia nanaraka ny torolàlana aza ianao? Raha noho izany antony izany dia eto ianao ary manana olana amin'ny fampiharana, dia eto ambany aho hohazavaiko aminao ny fomba hampiasa tsara ny fitaovana. Ary raha teo alohanao ny fanamafisana voalohany dia mahatsara kokoa aza! Ny tsy fihenjanana loatra, sambatra ilay lehilahy iny ????
Raha liana amin'ny atao hoe Aqara Hub ianao, dia ilazako ny famerenako ianao, izay ilazako amin'ny an-tsipiriany ny zavatra niainako tamin'ny fampiasana an'io fitaovana io Link. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny fandaminana tsikelikely ny Aqara Hub aho. Mijanona amin'ny toerana mety misy olana. Ny toko sasany koa dia hizara ho IOS (iPhone) sy Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Sony sns). Satria ny sasany amin'ireo hetsika ataontsika amin'ny toeran'ny telefaona.
Ahoana no hanombohana - fikirakirana Aqara Hub?
Ok, inona no mila atombohantsika? Mila manana Aqara Hub eo am-pelatanana isika. Raha manana dikan-teny eoropeana dia ampy izany, fa raha manana kopia avy any Shina ianao dia mila adaptatera amin'ny outlet poloney. Ho amin'izany dia tsy maintsy apetraka ny rindran-trano Mi Home. Fa maninona ianao no tokony hisafidy Mi Home fa tsy Aqara Home? Satria ny Mi Home dia manolotra mitovy amin'ny Aqara App miampy Xiaomi, Roborock ary vokatra sarimihetsika maro hafa.
Amin'izany rehetra izany, afaka manomboka isika amin'ny alalantsika mitady toerana hametrahana Gateway (Aqara Hub). Tokony ho hita eo afovoan-trano na trano fonenana izany. Miaraka aminy ny fifandraisana rehetra dia hifampiresaka, ka raha azo atao dia mendrika ny ho akaiky azy ireo ny tsirairay.
Manampy amin'ny rindranasa
Aorian'ny fametrahana ny fampiharana dia afaka ampiantsika ny fitaovana voalohany.
Talohan'ny nanaovantsika an'izany anefa, dia mipetraka ny fanontaniana manan-danja: taiza no nividiananao ny Aqara Hub? Raha avy any Sina, apetraho ny faritra mankany amin'ny tanibe Shina, ary raha any Eropa, dia any Eropa.
Marina fa afaka manohy manampy ny fampitaovana sy ny fanamafisana isika izao. Manana fomba telo hanaovana izany isika:
Raha miasa amin'ny alàlan'ny Bluetooth ny fitaovana, dia tsindrio ilay kisary fitadiavana fitaovana ary ny fampiharana azy dia hahita azy irery.
Azontsika atao koa ny miditra amin'ny anaran'ny fitaovana.
Rehefa manomboka manampy ny fitaovana ianao dia hiseho eo anoloanay ny efijery manaraka, hampahafantatra anao izay tokony hatao voalohany: mihazona ny bokotra eo amin'ny tampony mandritra ny 10 segondra (mihazona izany raha mbola mila ianao) mandra-pahazavana ny mavo mavo an'ny safidy hanomboka tselatra, i.e. ilay antsoina hoe. Fandefasana fitaovana. Manamarika izany izahay taty aoriana Nohamafisina ny fandidiana ary safidio ny toerana misy Gateway. Ity no fanamafisana fototra an'i Aqara Xiaomi.
Amin'izao fotoana izao, ny hetsika manan-danja roa mifandraika amin'ity bokotra ity dia tokony horesahina:
Ny fitazonana azy mandritra ny 10 segondra dia mahatonga ny fitaovana hanomboka indray. Raha manantona anao tsy nahy aho dia io no fomba tsara indrindra hanombohana azy io. Ny fitsipika fototry ny fitaovana informatika rehetra koa dia mihatra eto.
Ny fikitihana haingana ny bokotra mandritra ny 10 segondra mahery dia miteraka fiverenana amin'ny fikorontanan'ny orinasa. Midika izany fa ny Aqara Hub dia manadino ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'izany ary tsy maintsy hanomboka ny zava-drehetra ianao. Antso izany ny fomba farany rehefa tsy mandray andraikitra tanteraka i Hub.
Amin'ny dingana manaraka, ny fampiharana dia mamela anao hampiditra ny fitaovana ao amin'ny HomeKit. Noho izany antony izany, ny andalana manaraka dia natao ho an'ny mpampiasa iPhone ihany. Raha miasa amin'ny Android ny fitaovana ampiasanao, azonao atao ny manilika ity andalana ity.
HomeKit ao Xiaomi Aqara - ahoana ny fomba fiasa
Aqara Hub dia mifanentana amin'ny Apple HomeKit, izay fampahalalana tena lehibe. Ny fahaizana mametaka azy amin'ny rindranasa Home dia miseho raha vao manomboka ny paiso. Indray, manana safidy maro momba ny fomba ahafahantsika manao izany isika.
Izahay dia maka sary avy amin'ny sticker HomeKit, izay eo amin'ny boaty ary ny fitaovana. Azo antoka kokoa ny manala ny sticker amin'ny fitaovana.
Raha toa ka tsy misy fifandraisan-davitra tsy mifandraika dia apetraho amin'ny rindrina ny iPhone (tsy misy safidy toy izany ho an'ny Aqara Hub).
Click Tsy manana aho na tsy afaka mizaha ny kaodytaty aoriana Ampidiro ny kaody... ary ampidiro amin'ny fomba manual. Torohevitra tsara: raha misy olana amin'ny HomeKit, dia ampiasao ity fomba ity.
Aorian'ity dingana ity dia hipoitra ny varavarankely manampy ny tambajotra. Manome mazava ho azy isika Ok. Afaka mizotra lavitra an'io isika.
Ireto misy torohevitra tsara kokoa raha sendra olana ianao:
Ataovy azo antoka fa tsy misy endri-tsoratra miavaka amin'ny tenimiafina na anarana.
Aqara Hub dia miasa amin'ny tarika 2,4 GHz fotsiny, fa tsy 5 GHz.
Raha toa ka mbola misy ny olana amin'ny tamba-jotra ao an-trano, dia jereo ny faran'ny torolàlana, nampiako tao aho ny fomba hamahana ny olana miaraka amin'ny dingana amin'ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny dingana DNS.
Aorian'ny fotoana iray hitodiana tady, dia hifindra amin'ny fampiharana Home izahay. Ao isika dia afaka manova ny anaran'ilay safidy fanairana sy fanaovan-jiro, ary hampiantsika azy ireo amin'ny efitrano voafantina.
Amin'izao fotoana izao, Aqara Hub dia efa miaraka tanteraka amin'ny Apple HomeKit.
Hiverina amin'ny rindranasa Xiaomi Home izahay, ao amin'ny tabilao HomeKit ary tsindrio ilay fitaovana hanampiana azy eto koa. Hiseho ny efijery fampifanarahana.
Aorian'izay dia ampianay ao anaty efitrano ilay fitaovana ary manome anarana izahay (ataontsika misaraka amin'ny fangatahana Home and Xiaomi Home). Amin'ny farany dia misafidy raha te-hizara ny fitaovana ananantsika amin'ny olona iray isika (e.g. ny olona ao an-trano).
Farany, kitiho ny fitaovana, miseho ny fikandrana fanombohana (segondra vitsy) ary manaiky ny fanodinana data. Ary voila! Aqara Hub dia miasa tanteraka!
Raha te hampiasa ny fahaiza-manao feno an'ny Aqara Hub ianao ary manontany tena ny fomba hanomezanao azy io dia manasa anao aho amin'ny torolàlana automatique. Ary raha mitady famerenana hardware ianao dia manasa anao hijery ny vahaolana Aqara iray manontolo ianao. Araka ny hitanao dia i Shina izao dia firenena iray izay manolotra teknolojia avo lenta sy kalitao tsara. Tsy midika anefa izany fa tonga lafatra ny vokatra Xiaomi.
Olana amin'ny tambajotra sy Aqara Hub
Ary farany, ny andalana nampanantenaina momba ny olana amin'ny tambajotra. Ny iray amin'ireo olana misy amin'ny fifandraisana Aqara Hub dia DNS. Ny teboka teo aloha dia tena zava-dehibe, i.e. ny anarana sy ny tenimiafina tsy misy litera manokana sy ny tarika 2,4 GHz. Na izany aza, raha tsy ampy izany, dia azonao atao ny manandrana ny vahaolana eto ambany. Afaka mamaha an'io olana mahamenatra io ianao.
Ho an'ny IOS:
Ianao dia miditra amin'ny fikirana finday.
Velomy ny Wi-Fi.
Tsindrio ny tsipika "Ary" amin'ny tambajotra izay ao an-tranonao.
clique Hamarino ny DNS.
Miova ianao tanana.
Miova ianao DNS 0.0.0.0 .
Izao dia tokony hiasa izany, ary rehefa mifandray izany dia miverina atao safidy ity ary misafidy indray ho azy.
Ho an'ny Android:
Ianao dia miditra amin'ny fikirana finday
Mihodina ny tamba-jotra izay ao an-tranonao ianao.
Tsindrio indray ity tambajotra ity indray.
Midina ianao ary tsindrio Advanced.
W IP miova amin'ny DHCP mankany statatic ianao.
Manova ny DNS 1 mankany ianao 0.0.0.0 ..
Izao dia tokony hiasa ary rehefa mifandray izany, dia miverena amin'io safidy io ary misafidy indray DHCP.
Mividy Aqara Hub ao amin'ny Gearbest
Aqara M2 vs Aqara M1S - Fampitahana ny tanjona amin'ny horonantsary afaka 12 minitra!
Tsy azonao antoka raha ho anao ny Aqara M2 na ny Aqara M1S? Avy eo ity sarimihetsika ity dia ho anao! Androany dia ampitahainay ny tanjona roa farany an'ny Aqara!